China High lokukhipha 9KW 300L / min Uthuli imaski Ukwenza Machine ifektri abakhiqizi | UFrand
Lokukhipha High 9KW 300L / min Uthuli imaski Ukwenza Machine
Indlela yokulawula: Ukulawulwa kwe-PLC
Weigtht: cishe nge-2Ton
Isakhiwo semaski yobuso: Izingqimba 3-4
Blank imaski ukwenza umshini. Ungumshini wesiteji sangaphambili wokukhiqizwa kobuso obungalukiwe, kungumshini othomathikhi ngokuphelele ukukhiqiza amaski angenalutho kusuka ekudleni izinto ezingavuthiwe, ukufaka nokusika ucingo lwasekhaleni, ukuncenga, i-overedge, i-ultrasonic welding ukusika ukusika. Amaski angenalutho aqediwe azobalwa futhi kwaqoqwa kudluliswa.
Incazelo ye-Face Mask Ukwenza Machine
220V 60HZ noma ngezifiso
300L / iminithi
Ukukhiqizwa kwemaski yobuso
Ama-60-80pcs / min
Impahla yemaski yobuso
Isakhiwo semaski yobuso
Imisebenzi alahlwayo imaski Ukwenza Machine:
Lo mshini une-aluminium alloy rack. Ukubukeka kulula futhi kuhle. Ingaqeda ukwenza i-figization ngasikhathi sinye ngesikhunta esinembayo. Ngamandla aphezulu we-ultrasonic angenisiwe angakwazi ukuqinisa ngokuqinile futhi imfucuza izokhiqizwa ngokuzenzekelayo. Ukulawulwa kohlelo lwekhompyutha nokutholwa kwe-photoelectric kuyenza ibe nokuthembeka okuphezulu kanye nezinga lokwehluleka okuphansi. Umkhiqizo ungasetshenziswa kabanzi ekungcoleni okuphezulu kwezimboni, izimboni nezimayini.
Izici alahlwayo imaski Ukwenza Machine:
1. Yamukela inqubo yasekuqaleni yomshini waseJalimane, ngokwesici semaski esigoqiwe, yenza isiqeshana sempumulo nesembozo somzimba ngokuqeda okuzenzakalelayo ngenqubo ye-ultrasonic. Ikhwalithi eqinile nokusebenza kahle okuphezulu.
2. Ungenza imaski ka-2-5 ungqimba oluhlaza ngokudingekayo.
3. Lokhu kwehlukile komunye umshini wokugoqa imaski, lokhu kufaka iyunithi yokufaka isiqeshana samakhala umkhiqizi.
4. Ukulawulwa kwe-PLC, ukubala okuzenzakalelayo, Ukusebenza okulula, umkhiqizo omuhle wokuqeda.
5. Ukulawulwa kwezimoto zeServo, isilawuli sobukhulu ngqo.
6. Uhlaka lomshini olwenziwe nge-aluminium, izingxenye ezinesilingi, ukubukeka kobuhle obumangele kanye nokusebenza.
1 Iwaranti: unyaka ongu-1 kusukela ngosuku lokuthunyelwa. Uma kukhona umonakalo phakathi nesikhathi esidalwe nguMthengisi, uMthengisi uzobe esehlinzeka ngokulungiswa kwamahhala esizeni nokufakwa esikhundleni sezingxenye zamahhala (Okukodwa kwezingxenye ezigqokwa ngokushesha).
2 Umthengisi unikezela ngenkonzo yesondlo yempilo yonke, kuzodingeka izindleko zomsebenzi kuphela uma kungaphezu kwesikhathi sewaranti. Uma kukhona izingxenye zomonakalo ezidinga ukushintshwa kwengxenye futhi uMthengisi engenacala, uMthengisi unelungelo lokucela izindleko zempahla yokufaka enye into.
3 Umthengisi uzophendula kunoma yiziphi izimangalo ezinamaphutha kungakapheli amahora amane ngocingo, nge-imeyili nangefeksi. Yensizakalo yesondlo esifundazweni saseFujian kungakapheli amahora angama-36, ngaphandle kwesifundazwe saseFujian kungakapheli amahora angama-72. Ngokushintshwa kwezinto, isikhathi sangempela kungaxoxiswana ngokungeziwe.
4 Umthengisi unikeza ukuqeqeshwa kwamahhala kwabasebenzi abasebenza.
5 Umthengisi uzophinde ahlinzeke ngemininingwane efanele yobuchwepheshe, kufaka phakathi imiyalo yokusebenza nemidwebo yezingxenye zokugqoka ezisheshayo
Langaphambilini 1550KG 1 Isigaba 50-55 PC / Min imaskhi Ukukhiqiza Machine
Olandelayo: 55pcs / min 6KG / cm2 Umshini Wokwenza Imaski Wokulawula Okungeyona Nokwelukiweyo KweMask PLC
A1: Singabantu embonini yokukhiqiza imishini emaphaketheni futhi weprovide ephelele OEM nangemva-ukudayiswa service.
Q2: Ngingazi kanjani ukuthi umshini wakho usebenza kahle?
A2: Ngaphambi kokubeletha, sizobe avivinye umshini isimo ukusebenza ngawe.
imishini yokwenza imaski
umshini wokukhiqiza imaski
non nokwelukiweyo imaski ukwenza umshini
Izinhla ezintathu Kuhlinzwa Medical Face Imaski Mkhiqizo ...
10KW 30-40PCS / Min okuzenzakalelayo Face imaski Ukwenza ...
Medical Ukungcola imaski Ukwenza Machine Nge Alum ...
Okuzenzakalelayo ngokugcwele alahlwayo nonwoven 3 Layer Fac ...
40 Pieces / Min N95 Face Mask Ukwenza Umshini
Isivinini Esiphezulu Ngokuzenzakalelayo Ngokugcwele kwe-N95 Mask Ukwenza Umshini
kuhlinzwa ubuso imaski ukwenza umshini, non nokwelukiweyo imaski ukwenza umshini, non nokwelukiweyo ubuso imaski ukwenza umshini, hose clamping umshini, imaski yokuhlinzwa okwenza umshini, umshini wesifihli sobuso,